तिहारको तेश्रो दिन देशैभरि दिपावली गरी मनाइदै
Nepali Radio / F.M. / TV आजै महाकवि देवकोटाको जन्म शतबार्षिकी मनाइँदै
Deusi-Bhailo in Kathmandu. Photos: Siataram
काठमाण्डौं, October 28, 2008- नेपालीहरुको महान् चाड तिहारको तेश्रो दिन धुमधाममा साथ देशैभरि मनाइदै छ । राजधानी काठमाडौं लगायतका स्थानहरुलाई तिहारको रौनकले मज्जासँग छोएको छ । टोल-टोलभरि देउसी भैलाका गीत गाइरहेका र भट्याईरहेको देख्न सकिन्छ ।
तिहारमा व्यस्त भएका कारण सार्वजनिक यातायातका गाडी राजधानीमा कमैमात्र चलेका छन् । जति चलेका छन् ती मध्ये अधिकांसमा देउसी भैलो खेल्ने टोलीलाई देख्न सकिन्छ ।
तिहारको तेश्रो दिन गाइको तथा सम्पत्तिकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरेर मनाउने चलन छ । आजैकादिन दिपावलीसमेत गर्ने चलन छ । दीपावलीको दिन भएकाले आजको दिनलाई तिहारको एक महत्वपूर्ण दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । आजै गाई तिहारपनि परेकाले विहानैदेखि भक्तालुहरुले गाइको पूजा गरिरहेका छन् भने बेलुकी हुने लक्ष्मीको पूजा तथा दीपावलीको तैयारीमा मानिसहरु लागेका छन् ।
महाकविको शालिकमा माल्यार्पण Photos: Siataram
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्तीपनि आजै परेकाले देशभरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्तीपनि देशभरि मनाइँदै छ । आजभन्दा ठीक एक सय बर्षअघि महाकवि देवकोटाको जन्म भएको थियो । त्यसैले यसपटकको जन्म जयन्तीलाई उहाँको शतबार्षिक समारोहको रुपमा मनाइएको छ । यस उपलक्ष्यमा देशव्यापी रुपमा कार्यक्रमहरु भैरहेका छन् ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शतवार्षिकी मनाइँदै
लक्ष्मीपूजाको तैयारी Photos: Siataram
गाइको पूजा गरी गाई तिहार मनाइदै Photos: Siataram